Kuuriyada Koofureed waxay noqoneysaa seddexaad suuqa ugu weyn ee laga dhoofiyo Asia-Pacific illaa 2025
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Kuuriyada Koonfureed » Kuuriyada Koofureed waxay noqoneysaa seddexaad suuqa ugu weyn ee laga dhoofiyo Asia-Pacific illaa 2025
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Kuuriyada Koonfureed • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Culaysyo culus iyo cadaadis kaga imanaya madaxda sare ayaa ka dhigay Kuuriyada Koofureed inay diidaan kuwa sameeya fasaxyada waqtiyadii lasoo dhaafay, iyagoo si kama 'ah u saameynaya safarada gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
Ka bixitaanka caalamiga ah ee ka socda Kuuriyada Koofureed ayaa si isdaba joog ah u sii kordheysay kahor COVID-19.
Cudurka faafa ee 'COVID-19' ee sanadka 2020 wuxuu arkay heerarka safarada gudaha iyo kuwa dibedda labadaba si aad ah hoos ugu dhacay.
In ka badan 80% safarka dibedda ee ka imanaya Kuuriyada Koonfureed ayaa sida caadiga ah diiradda lagu saarayaa gudaha gobolka APAC.
Dalxiiska dibedda ee ka imanaya Kuuriyada Koofureed lama saadaalinaayo inuu dhaafi doono heerarka safka hore ilaa 2024, markaasoo la saadaalinayo bixitaanku inuu gaadho 29.6 milyan. Si kastaba ha noqotee, Kuuriyada Koofureed ayaa la saadaalinayaa mid ka mid ah xilliyadii ugu koritaanka badnaa laga soo bilaabo 2020 - 2025 ee gobolka Aasiya-Baasifigga (APAC), oo leh isugeyn kobaca sanadlaha ah (CAGR) oo ah 40% iyo 30.2 milyan oo safar dibedda ah marka la gaaro 2025. Tani waxay sameyn laheyd South Korea suuqa saddexaad ee isha ugu weyn ee ka baxa gobolka APAC horay u socda.
Warbixintii ugu dambeysay ee warshadaha, 'Aragtida Dalxiiska Isha Suuqa: South Korea (2021)', waxay ogaatay in bixitaanka caalamiga ah ee ka socda Kuuriyada Koonfureed ay si isdaba joog ah u korayeen kahor COVID-19 (CAGR 2016-19: 8.7%). Ku lug lahaanshaha suuqan ilaha iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada iyo isdhexgalka tikniyoolajiyadda ayaa caddeyn kara waxtar weyn u leh jawiga masiibada ka dib.
Culaysyo culus iyo cadaadis kaga imanaya madaxda sare ayaa ka dhigay Kuuriyada Koofureed inay diidaan kuwa sameeya fasaxyada waqtiyadii lasoo dhaafay, iyagoo si kama 'ah u saameynaya safarada gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Waxqabadyada dowladda ee lagu boorrinayo waqtiga firaaqada badan iyo yareynta saacadaha shaqada ee 2018, si kastaba ha noqotee, saameyn ayey yeelatay waxayna aragtay koror sanadle ah oo gudaha ah (YoY + 44.7%) iyo safarka caalamiga ah (YoY + 8.3%).
Cudurka faafa ee COVID-19 sanadka 2020 wuxuu si dabiici ah u arkay heerarka labada guriba (YoY -70.6%) iyo dibedda (YoY -80.6%) socdaalku aad ayuu hoos ugu dhacay. Si kastaba ha noqotee, kharashka badan marka la safrayo iyo rabitaanka weyn ee waayo-aragnimada safarka kale, macnaheedu waa Kuuriyada Koofureed waxay noqon kartaa fursad suuq macquul ah oo loogu talagalay meelo kala duwan oo ka mid ah jawiga masiibada ka dib.
In ka badan 80% safarka dibedda ee ka imanaya Kuuriyada Koofureed ayaa sida caadiga ah diirada lagu saaraa gudaha gobolka APAC, oo ay ku soo dhawaato dhawaanshaha iyo sahlanaanta guud ee safarka. Mareykanka sidoo kale waa bartilmaameedka koowaad ee suuqan ilaha. Tani waxay u badan tahay inay sabab u tahay arrimo ay ka mid yihiin fursadaha qorraxda iyo xeebta, biririfta magaalada iyo khibradaha caloosha, kuwaas oo loo aqoonsaday inay yihiin saddexda ugu sarreysa ee inta badan la qaato fasaxyada sannadka 2019, sida lagu sheegay sahan macmiil dhowaan.
Teknoolojiyada ayaa sidoo kale qayb ka ah doorbidyada safarka iyada oo jawaabihii 71% ee Kuuriyada Koofureed loo aqoonsaday inay yihiin 'had iyo jeer', 'badiyaa' iyo 'xoogaa' ay saamayn ku yeelanayso 'sida dijital ahaan ay u horumarsan tahay / ugu fiicantahay wax soo saarka / adeegga' sahanka macaamiisha Q1 2021. Isla sahanka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in 51% ay waqti badan ku qaataan internetka guud ahaan; tani way ka sarraysay waddan kasta oo kale ee la daraaseeyay (wadarta waddamada la daraaseeyay: 42), oo soo jeedinaysa ku tiirsanaanta tikniyoolajiyadda inay korodhay inta lagu gudajiray Cudurka faafa ee COVID-19.
Fursadaha lagu soo jiito dalxiisayaasha Kuuriyada Koonfureed waxay inta badan ku tiirsan yihiin is dhexgalka tikniyoolajiyadda khibradda socdaalka. Warbaahinta bulshada, kaqeybgalka abka iyo adeegyada tarjumaadda ayaa kaliya kordhin doonta khibrada soo booqdaha.